Fikradaha Kaadhadhka Boostada Kirismaska ​​ee DIY ee Ugu Fiican | Abuurista khadka tooska ah
Kirismas kasta oo aan helno kaararka boostada oo loogu hambalyeynayo ciidda Masiixiga. Waa run in tan dhaqanku wuu lumay ama wuu isbeddelay imaatinka cusub teknooloojiyada.
Waxaan dooneynaa inaan kugu dhiirrigelino fikrado badan sidaa darteed waxaa lagugu dhiiri galinayaa inaad sameysato hambalyadaada ee kirismaska. In yar oo ka mid ah male, waqti iyo dhalanteed waxaad noqon kartaa asalka ugu badan ee qoyska ama asxaabta.
1 Kaararka boostada lagu sameeyo
2 Isticmaal jirkaaga
3 Kaararka boostada leh badhannada
4 Kaadhadh ay ku qoran yihiin kartoon
5 Fikrado badan oo leh kaararka
6 Kaadhadh daabac leh
7 Ma taqaan cajaladda Washi?
Kaararka boostada lagu sameeyo
Shaqo tag oo hal-abuurkaagu ha duulo sameynta kaararka kirismaska ​​oo gacanta lagu sameeyo. Waa hawl fiican in lala sameeyo carruurta yaryar ee guriga ku jirta. Wanaagsan qorshaha axada! Waxaad ubaahantahay wax yar oo dhiirigalin ah iyo waxyaabo aad dib ugu isticmaali karto guriga. Iyagu waa farsamooyin caan ah oo loo yaqaan DIY (naftaada u samee), tarjumaadda ayaa ah "naftaada u samee".
Tusaalaha ugu horeeya ee aan dooneyno inaan ku tusno waa mid aad u fudud, waxaad u baahan doontaa oo keliya rinjiga, calaamadeeyayaasha ama qaar ka mid ah waxyaabaha midabbada leh iyo jirkaaga. Xaqaas ayaad u aqrisay, jirkaaga. Waxaan u soconaa Samee astaamaha kirismaska ​​oo leh daabacado, gacmo ama cago gaar ah.
Aan aragno qaar tusaalooyin:
Sida aan ku arki karno sawirka, kuwan deerada waxay yihiin lagu sameeyay faraha waxaan helay rinji. Hadhow, markay qallajiso, waxaan soo jiidan doonnaa indhaha, dhegaha iyo geesaha. Waxaan ku wehelin doonnaa sawirkeena qoraal hambalyo iyo ... diyaar!
cunt rinjiga midabada kala duwan raadkeenana waxaan ka dhigi doonnaa waxa noqon doona nalalka Kirismaska. Markay qalalan tahay waxaan ku biiri doonnaa xariijin aan caadi ahayn si aan u siino saameynta fiilada.
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la isticmaalo dhammaantiis Baabacada gacanta oo hal-abuurkeennu ha duulo. Sida tusaalaha barafka la sawiray, waxaan ka dhigi karnaa ragga caqliga badan, Santa Claus ama jilayaal kale oo qabaal ku jira.
Kaararka boostada leh badhannada
Hal ikhtiyaar ayaa ah qalabka dib u warshadeynta iyo walxaha aan ku haysanno guriga si loogu sameeyo kaararka boostada. Xaaladdan oo kale, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad ka soo baxdo sanduuqa wax lagu tolo oo aad kuwaa oo dhan u isticmaashid botones lamaan wadaag la'aan aan haysanno macno la'aan.
Isticmaal badhamada? Waxaa jira qaabab badan oo loogu daro iyaga naqshadeena. Aan idin tusno qaar tusaalooyin, waxay hubaal kugu dhiirrigelinayaan inaad adigu abuurto.
Sida aad arki karto, way fulin karaan dabeecad isku mid ah siyaabo badan oo kala duwan, mid walibana wuxuu leeyahay quruxdiisa. Mala awaalkaagu ha duulo una isticmaal qalabka aad haysato qaab caqli badan. Kuwaas Nin baraf wata lagu sameeyay botones aad ayey u fududahay in la qabto natiijaduna runtii waa asalka ah.
Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa badhamada sida xarfaha. Xaaladdan oo kale, "ho ho ho" waa la qoray, onomatopoeia ee Santa Claus sameeyo marka uu qoslayo. Xarafka "o" waxaa lagu badalay badhan. Waa fikrad aad u fudud laakiin natiijada waa mid aad u wanaagsan.
Qurxinta Kirismaska, kubadaha aan sudhan nahay geedka lagu metelay badhamada midabada kala duwan leh. Deg deg ah, fudud oo midab leh!
Kaadhadh ay ku qoran yihiin kartoon
ka kaararka midabka leh waxay noqon kartaa saaxiibkayaga ugu fiican si aan wax badan u abuurno profesional kaararka kirismaska. Annaga badbaadiyo waqti badan midabaynta. Ka taxaddar in ay jiraan fikrado lagu joojinayo tareenka.
cunt saddex kaar oo midabo kala duwan leh, mid qayb kasta oo jidhka ka mid ah waxaad ka heli kartaa yaabab dhab ah. Tani Santa Claus qurux badan waxaa lagu sameeyay:
Kaar guduud: koofiyad.
Midabka hilibka kartoonka: Wejiga.
Kaarbood cad: Qeybta hoose ee koofiyadda iyo gadhka.
Kaliya waa inaad jab gabal kasta cabirka aad u maleyneyso inuu ku habboon yahay, xeelad ayaa ah tan geesaha waa la jeexjeexay. Ku dhaji iyo mar dambe sawirid sanka iyo indhaha. Aad u fudud!
Sida aan ku aragno sawirka, waxaan ku guuleysan karnaa a Nin baraf wata aragtida shimbirta qaab aad u fudud. Haddii aan falanqeyno sida loo sameeyay kaarka boostadan, waxaan ogaanay inay runtii fududahay in la gaaro natiijo wanaagsan. Waa inaan jar saddex qaybood oo cabbirkoodu kala duwan yahay. Waxaan isticmaali doonaa kaar cad. Qeybahaani waxay noqon doonaan jirka barafka. Waan sawiri doonaa oo jareynaa sankaah hubka iyo xarig. Inta hartayna waan raad raaci doonnaa leh calaamadee madow: indhaha iyo afka.
Haddii aan raadinno a heerka ugu sarreeya ee hawsha, waxaan ku tuseynaa taxanahan kaararka boostada ah oo u baahan waqti dheeri ah iyo raad raac. Waxaad tixgelin kartaa sameynta dhowr kaar oo ka mid ah moodooyinka kala duwan. Sidan oo kale asxaabtaadu, tusaale ahaan, waxay u arki doonaan in mid kasta oo ka mid ahi leeyahay qaab kale. Waa hab lagu muujiyo inay wax badan tahay shakhsi ahaaneed oo iyana aad bay u sii ogaan doonaan dhalanteed.
Kaararkaani boosta ayaa matalaya jilayaal kala duwan taas ayaa nagu habboon Taariikhaha kirismaska:
Santa Claus, dabeecad Mareykan ah oo dalkeena u timid inuu joogo. Waxaan qaadanay dhaqankan sanado badan hada.
Reno, waa xayawaanka jiidaya Santa's sleigh.
Penguin, oo loola jeedo qabowga xilliga qaboobaha.
Nin baraf wata. Waxa kale oo loola jeedaa qabowga iyo barafka.
Fikrado badan oo leh kaararka
Waxaa jira fikrado badan oo kala duwan, waxaan soo jeedinaynaa qaar ka mid ah:
ka Saddex Nin oo Caqli badan.
Muuqaalka dhalashada Beytlaxam.
Geela, xayawaanka kiiskan lasocda sadexda caaqil ee raaca xidigta toogashada.
Geedka Kirismaska. Waxaan ku qurxin karnaa waxyaabo badan sida kubbadaha, nalalka iyo xiddiga.
Adeer Nadal ama cagatió, waa dhaqan Catalan ah.
Ka mid ah fursado kale oo badan.
Kaadhadh daabac leh
Soo jeedin asal ah ayaa ah si loo dhejiyo kaararka boostada. Marka hore, waa inaan dhibic Kartoonka Dhibco ayaan ku sawiri doonnaa qaabka aan doonayno inaan ku dhejino. Waxaan ku sameyn doonnaa daabacaadda kartoonka, sidaa darteed, waa inaan aad uga taxaddarnaa inaan jabin taageerada.
Tallaabada ugu horreysa ee la qaadayaa waa tan naqshadeyntayada. Waxaan ku sameyn karnaa gacan ama waxaan ka eegi karnaa khadka toosan oo daabacan karnaa. Waxaan ku talinaynaa inay ahaato a sawir fududIyadoo khadadka yar iyo in kuwani yihiin kala dhex galay. Sababta waa mid aad u fudud, maadaama hadday godadku isu dhow yihiin ay kala jeexi karaan marka la qodo.
Dhaji sawirka iyadoo cajalad ku duuban qaybta hore kaarka, meesha aad rabto inaad dhigto sawirka. Hole calaamadeynta qaabka naqshadeynta. Mar dambe, ka saar xaashida waxaadna bilaabi kartaa daabac. A khiyaamo in la sameeyo godadka iyadoo aan la dhaawicin kartoonka waa in a taageero jilicsan hoose. Waxaad isticmaali kartaa guf, polystyrene, tirtire ama walxo kasta oo leh astaamahan. Ka fogee masaafada ugu yar 3 iyo 5 milimitir inta u dhexeysa godka si looga hortago inay jabto.
Ma taqaan cajaladda Washi?
Waxaan isticmaali karnaa noocyo badan oo qalab ah, dhowr sano ka horna waxaan cajalad washi ah. Waxay ku saabsan yihiin cajalado dhejis ah oo leh qaabab qurxin iyo midabbo leh.
Waxaan awoodi doonnaa inaan ku sameysano kaararka boostada oo aad u qabow kartoon, calaamadeeye iyo cajalad washi ah. Waan ka heli karnaa iyaga qiimo aad u hooseeya, gaar ahaan haddii aan iibsanno baakad by internetka. Waxaan kuu daynay xiriiriye Halkan haddii ay dhacdo inaad ku dhiiratid inaad iibsato qalabkan.
Waxaan ku bilaabaynaa a Geedka Kirismaska. Sida aad u aragto, waa wax aad u fudud in la sameeyo, waxaan u baahanahay kaliya dhowr midab. Waxaan ka goyn doonnaa xargaha dherer ka weyn ilaa mid gaaban waana dhejin doonaa iyaga.
Sida aan ku aragno sawirka kore, waxaan ku sameyn karnaa looxyo cajalad washi ah waxaan ku qori karnaa wixii aan dooneyno bartamaha. Waxaan raadin karnaa fikradaha xaraf si aad u hesho fikradaha sameynta xarfaha qabow. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn!
Hore u soco oo samee kaararkaaga boostada iyo wixii ka sarreeya ...MERRY KRISTI!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » DIY fikradaha boostada Christmas-ka